Yakanakisa TV nhepfenyuro ya2018: zvavari uye maonero | Ndipei zororo
Kubva kuputika kwemapuratifomu ekushambadzira, isu tinoratidzwa kune yakawanda huwandu hwezvinyorwa kubva pane akateedzana pa internet uye terevhizheni. Nhasi vava imwe yemidziyo mikuru uye zviri kuwedzera kuoma kusarudza zita rauchadyara maawa enguva yako. Kune mapuratifomu akasiyana anosanganisira zvemukati zvemukati. Netflix, Amazon Prime uye HBO ndiwo matatu emapuratifomu anotungamira erudzi urwu rwemukati. Muchinyorwa chino ndinopa runyorwa nevashanu akanakisa akateedzana e2018 weumwe neumwe wavo. Inosanganisira matrailer!
Iko kusarudzwa kunoenderana nematanho evateereri eanowanikwa akateedzana uye nemwaka wavo wakasiyana.
1.1 1. Mapepa House
1.2 2. Akashandurwa Carbon
1.3 3. Vasikana veCable
1.4 4. 13 Zvikonzero Nei
1.5 5. Iyo Alienist
2.1 1. Goriyati
2.2 2. Murume ari muHome Castle
2.3 3. Zvakajeka
2.4 4. Vanamwari veAmerica
3.1 1. Mutambo weZigaro
3.2 2. Ngano yeMurandakadzi
3.3 3. Nhema Diki Diki
3.4 4. Chokwadi Detective
Ndiyo chikuva chinonyanya kushandiswa uye yakavhurwa muna 2010. Inozivikanwa seyekutanga kupuratifomu chikuva ine yakabudirira vakawanda kuvhurwa. Inowanikwa zviriko pasi rese kusara kweChina (kusanganisa Hong Kong neMacao), Siria neNorth Korea.
Iwo akateedzana ausingakwanise kupotsa anotevera:
1. Mapepa House
Inozivikanwa seyakanyanya kuyerwa mutauro wekunze akateedzana muNetflix nhoroondo. Iyo nzvimbo inotarisana ne kuba kweNational Mint uye Stamp Fekitori, zvakarongeka zvisina kurongwa na "Muzvinafundo." Zvakafanana izvo zvinounza pamwechete timu yematsotsi akasarudzika munzvimbo dzakasiyana. Imwe neimwe ine zita rekunyepedzera, tinowana Tokyo, Berlin, Nairobi, Moscow, Rio, Denver neHelsinki yakaputirwa muhurongwa hwaizotora kutendeuka kusingatarisirwi uko kunenge kuri kudikanwa kuti ugadzirise kuzadzisa chinangwa.
Isu tinowana vatapwa, vanotaurirana, mapurisa uye vazhinji vezviito zvinokuchengetedza iwe kumucheto kwechigaro chako kusvika kumagumo chaiko.
2. Akashandurwa Carbon
Mune ramangwana riri kure, nzanga yashandurwa zvizere nehunyanzvi. Zvekuti vanhu vanoramba chinamato vane mukana wekupfuura nenguva nekusafa neimwe nzira nepo kudyara uko kune ruzivo rwese rweyeuchidzo nehana yemunhu wega wega kuchichengetwa kwakakwana. Uku kuiswa kunoiswa mumutsipa wemutsipa uye kunoiswa mumitumbi yevanhu inochinjika uye inoita se "machira".
Iye protagonist ndiTakeshi Kovacs, ndiye aimbove musoja wevapanduki anotengwa uye "akamutswa" mushure memazana emakore nemumwe wevarume vane simba kwazvo kuti atumirwe kunhumwe hwakakosha. Mubairo: rusununguko uye mhanza!
Kovacs anobvumirana, anoenda kubasa, uye anowana chokwadi chisingatarisirwi nezve hupenyu hwake.
3. Vasikana veCable
Yakagadzwa muma20s, akateedzana inotaurira nyaya yeshamwari ina dzinozivana nekushanda sevashandisi vefoni mukambani inonyanya kukosha yekutaurirana muMadrid. Mumwe nemumwe wevaratidziri anonzwa akabatwa mumhuri dzakasiyana uye nemagariro. Ivo vakazvipira kuputsa mapadigidhi maererano nezvinotarisirwa neveruzhinji kwavari.
Panguva imwechete a rudo Triangle pakati pemutambi mukuru, hushamwari hwake mudiwa uye muridzi wekambani. Pakati pawo pane mutambo usingagumi uzere nenyonganiso, rudo rune shungu uye kutengesa. Mwaka wechipiri une kutanga kusingatarisirwi kunoisa rusununguko rwevatsigiri panjodzi nekuti vanogona kuzviona sevabatsiri vemhondi.
4. 13 Zvikonzero Nei
Iyo nyaya yaHanna Baker haina kupedzwa kuudza, mwaka wechipiri iri pamusoro pematare evabereki vake pamusoro peRusununguko High. Mukati mekuyedzwa, zvakavanzika zvinowanikwa zvinoita kuti vanhu vanopfuura mumwe vabvunde. Mwaka uno, mapikicha anoratidzika semidziyo yekuferefeta
Kupindwa muropa, kuzviuraya, bonde, kushandiswa kwezvombo uye zvepabonde zvinoramba zviri misoro mikuru yenyaya dzakateedzana. Gadzirira dumbu rako kune zvimwe zvitsauko zvine zviitiko zvine simba.
5. Iyo Alienist
Iyo inonakidza kwepfungwa yezvikamu gumi zvinoumba iwo akateedzana akaiswa muzana ramakore reXNUMXth New York uye nyeredzi naDakota Fanning, Daniel Brühl naLuke Evans. Takawana Ritual mhondi uyo anoita hwakawanda humhondi humhondi. Komisheni anovhura nyaya inoongororwa zvakavanzika nemutori wenhau, munyori webazi remapurisa uye chiremba wepfungwa. Iyo yekupedzisira inozivikanwa se "mutorwa" inodzidza pathologies uye zvinokanganisa maitiro evanhu vari kunze kwavo.
Iyo inotungamira online yekutengesa chikuva yakasarudza kuwedzera bhizinesi rayo uye kuvhura Prime vhezheni muna 2017. Tevere ini ndinopa akanakisa akateedzana ayo Amazon Prime Vhidhiyo inofanira kupa:
Inotaurira nyaya yaBilly Mcbride, a gweta rinodzingwa nefemu yaakabatsira kuwana. Billy anova mudziviriri wepakati uye anowira mukudhakwa. Gare gare anokokwa kujoina a yepamutemo kurwisa yako yekare femu uye une mukana wekuzvidzikunura. Mwaka wechipiri unomumanikidza kudzidzira mutemo zvakare kubatsira mwanakomana weshamwari yake, uyo anopomerwa mhosva yekuponda kaviri. Panguva yechirongwa, guta reLos Angeles rinoona rangano huru.
2. Murume ari muHome Castle
Iyo ine mwaka miviri iripo uye chetatu kuti isunungurwe muna 2018. Iyo zano inorondedzera mamiriro ezvinhu umo Hondo Yenyika Yechipiri yakanga isati yakundwa nemaAllies. Funga nezve chimwe chakasiyana pane nyika yanhasi umo United States yakakamurwa kuita matunhu anotongwa neNazi nemaJapan. Hitler akakunda hondo!
Iyo inoshamisa yeAmerican comedy ine nyaya inotaurira iyo kutendeuka kwe transgender kune vakwegura: Mort anova Maura Pfefferman. Zano iri rinosanganisira mhuri yose ine vana vatatu vanozvifunga uye aimbova mukadzi.
Kujeka kuri Amazon Prime's Yakanyanya Kupa Mutsara: Akakunda mibairo yeakanakisa akateedzera akateedzana uye mutambi panguva ye 72nd Golden Globes. Kusvika parizvino, kwave nemwaka mina, yekutanga yakatanga muna 2014.
4. Vanamwari veAmerica
Shadow Mwedzi, tsotsi richangoburitswa mutirongo uye rakatarisana nerufu rwemukadzi wavo. Munyika yaasinganzwisisi, anosangana naVaChitatu vanomupa basa semubatsiri nemurindi. Mumvuri uri mune rakasiyana nyika uko mashiripiti aripo uye isu tinowana vamwari vekare vanotya kuve vasina basa nekuda kwetekinoroji uye vamwari vatsva.
Marius anobuda mutirongo uye anotevedzera waaibata naye muchitokisi anonzi Pete. Anosanganazve nemhuri yaPete chaiye uye anowana matambudziko makuru ayo iyewo aachafanirwa kusangana nawo. Mhuri nyowani haizvizive uye anoenderera mberi nechirade.
Inopa mazita e yavo yeAmerican akateedzana yeiyo yakati terevhizheni chiteshi. Kutanga kwayo muSpain kwaive munaNovember 2016 mukubatana neVodafone uye ine maitiro maviri munyika:
HBO: zvakajairika zvemukati zvevana, vechidiki nevakuru vane yakakura zvemukati mitezo uye mabhaisikopo emhando dzese
HBO Mhuri: Inonangidzirwa zvakananga kune vateereri vevechidiki-vechidiki. Izvo zvemukati zvinokodzera mazera ese
Mashanu akanakisa akateedzana e2018 papuratifomu aya ndiwo ataurwa pazasi:
1. Mutambo weZigaro
Iyo ndeimwe yeakanyanya kubudirira akateedzana mumakore achangopfuura ane akaenzana ratings. Nemwaka wechisere kutanga kuratidzwa muna 2019, tinowana chisingaperi kurwira pakati pemhuri dzinokudzwa kutonga umambo huviri uye kutora chigaro chesimbi. Mazita ekupedzisira Stark, Baratheon, Lannister, Targaryen, Greyjoy, Tully naAryn vane vatambi vanopa akateedzana kubata kwakasarudzika uye kwekunyepedzera. Nekudaro, ivo vese vane vaWhite Walkers sevazhinji vavengi. Icho chaicho chakateedzana chausingakwanise kupotsa!
Iwe uri munguva yekubata pamberi pekutanga mwaka wekupedzisira muna 2019.
2. Ngano yeMurandakadzi
Iyo nyowani uye inozivikanwa mbiri ndeye yenyaya yaOfred, mukadzi anoshanda sehapwa bonde. Iyo nyaya inoitika mune a inhema uye vanhu vasina vanhu uko mukadzi anotorwa seimba yehurumende. Kune vashoma vakadzi vakaorera, vanomanikidzwa kushandira mhuri dzakapfuma uye kubereka vana kuwedzera huwandu hwevagari. Iyo protagonist iri kutambura kuputsa nehutongi uye kupora mwanakomana uyo atorerwa kubva kwaari.
Mwaka wechipiri unotanga muna Chikunguru 2018 uye unovimbisa kuburitsa gakava rakawanda.
3. Nhema Diki Diki
Nenhamba huru yakatarisana naNicole Kidman, Reese Whiterspoon naShailene Woodley, nyaya yacho yakanangana vakadzi vatatu vanoita kunge vakakwana. Kuvhara zvinonyadzisa zvemagariro zvinoburitswa pachena uye ma protagonist ane hukama mu kuferefeta kuponda.
Iwo akateedzana akarongwa seye mini-akateedzana uye akatsvaira zvikwambo zveboka muna 2017. Nhepfenyuro iyi yakafemerwa zvekuti mwaka wechipiri uyo Meryl Streep achabatana ari mumabasa.
4. Chokwadi Detective
Yakatangwa muna 2014, Yechokwadi Detective maficha a Mapurisa kuferefeta nyaya ine yakazvimirira cast mumwaka wega wega. Zano rega rega rinotenderera mhosva dzekuuraya: Mwaka 1 wakafemerwa nemhondi yekuuraya yakavhimwa kwemakore gumi nemanomwe, nepo mwaka wechipiri wakanangana nekupondwa kwemunhu wezvematongerwo enyika weCalifornia.
MunaAugust 2017, mwaka wechitatu wakaziviswa uye hausati waburitswa.
Westworld ndeye Futuristic yekuvaraidza paki iyo inomhanyiswa neakanyanya chaiwo mauto: marobhoti. Chinangwa chepaki ndeche ita chero muenzi fungidziro kuburikidza nekuziva kwekunyepedzera mukati medunhu rekare reAmerican West. Vashanyi vanogona kuita chero fungidziro, kusanganisira zvisiri pamutemo zviito sekuuraya nekubata chibharo.
Iwo akateedzana ane mwaka miviri uye anosanganisira Anthony Hopkins pakati peavo vatambi, pamwe naEvan Rachel Wood naEd Harris.
Sezvauchaona, watove nazvo 15 mazita akarondedzerwa seakabudirira muna 2018 uye ane sarudzo ndeyemhando dzakasiyana. Zvino hongu! Nakidzwa nemaawa anotevera uine vimbiso yekuti sarudzo yako ichave yakakosha.
Zvino, kana iwe watoona ese akateedzana kana kuda kutsvaga dzimwe sarudzo, unogona kutarisa kumabhuku emamwe mapuratifomu ekushambadzira akadai Movistar +, Rakuten TV, Filmin, YouTube TV kana Hulu. Isu tinovimba iwe waifarira urwu runyorwa rweakanakisa terevhizheni akateedzana egore rino!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Yakanakisa TV nhepfenyuro ya2018
Maitiro ekutsvaga iyo bhaisikopo usingazive zita racho